နိုဗယ်ဆုပေးပွဲတွင်.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း စဆုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » နိုဗယ်ဆုပေးပွဲတွင်.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း စဆုံး
နိုဗယ်ဆုပေးပွဲတွင်.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း စဆုံး
Posted by kai on Jun 17, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi | 21 comments
Aung San Suu Kyi, Oslo, 16 June, 2012
The Nobel Committee concluded its statement of 14 October 1991 with the words: “In awarding the Nobel Peace Prize … to Aung San Suu Kyi, the Norwegian Nobel Committee wishes to honour this woman for her unflagging efforts and to show its support for the many people throughout the world who are striving to attain democracy, human rights and ethnic conciliation by peaceful means.” When I joined the democracy movement in Burma it never occurred to me that I might ever be the recipient of any prize or honour. The prize we were working for wasafree, secure and just society where our people might be able to realize their full potential. The honour lay in our endeavour. History had given us the opportunity to give of our best foracause in which we believed. When the Nobel Committee chose to honour me, the road I had chosen of my own free will becamealess lonely path to follow. For this I thank the Committee, the people of Norway and peoples all over the world whose support has strengthened my faith in the common quest for peace. Thank you.
ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ ဒေါက်တာကောင်းမြတ်ကျော်နဲ့ တင်ပေးတဲ့သဂျီးကိုကျေးဇူးပါ ..
မူရင်းကိုလည်း ကူးသွားပါတယ် ..
ဒီမှာ ပရင့် ထုပ်ပြီဖြန့်မှာ အခုစပြီဗျာ
ဘာသာပြန် မိန့်ခွန်းလေး အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ယမန်နေ့ က ဖွတ်ချက်ဖွတ်ကွန်နက်ရှင်နဲ့ဆုချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနား အဖွင့်လေး ကြည့်မိသဗျား..
တော်တော် ခမ်းနားပါပေ့..တူရီယာပေါင်းစုံတီးမှုတ် ဖျော်ဖြေတာလေးလဲ နားထောင်မိသဗျ..ဗဲဒီးဂွတ်ပဲ..
မိန့် ခွန်းပြောတဲ့အခန်းလဲရောက်ကော..ဗွီဒီယိုက လုဒ်ဒင်လုပ်နေတုန်း နိုဗယ်လ် အခမ်းအနားက အိုဗာဖြစ်သွားလို့ ..ငုတ်တုတ်မေ့ပါကော..ကွန်နက်ရှင်..ကွန်နက်ရှင်…
ဂုဏ်ယူဝမ်းသာပါကြောင်း အန်တီစု ခင်ဗျား..
ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ ဆရာနဲ့တင်ပေးတဲ့ဆရာတို့ ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား..
အင်္ဂလိပ်လို ကိုယ့်ဘာသာဖတ်ရင် တလွဲချည်းပဲ
ပိုစ့်တင်ပေးတဲ့ သူကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နို့မဟုတ်ရင် အလွယ်တကူဖြစ်ဖို့ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး
“””ဒီဆုဟာကျွန်မကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ နှင့်လူ့အခွင့်အရေး အတွက် လှုပ်ရှား ရုန်းကန်ရာမှာ ကမ္ဘာရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရစေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကို မေ့မသွားကြပါဘူး။”””
ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ ဒေါက်တာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကူးထားလိုက်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ သူကြီးနှင့် ဘာသာပြန်ပေးသူကိုပါ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာကောင်းမြတ်ကျော်ရဲ့ ဘာသာပြန်တော်တော် ကောင်းပါတယ်။
တုပ်ကွေးမိတဲ့ကြားက ည ၂း၃၀ ထိရေးပေးတဲ့ စေတနာကိုလည်းလေးစားပါတယ်။
ပို၍ကြင်နာတက်သော Kinder ဆိုတဲ့ စကားလေး သဘောကျပါတယ်။
““ငြိမ်းချမ်းဆိုတဲ့ စကားနှစ်လုံးကပဲ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင် မီးငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာ ဖြစ်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အေးချမ်းမှုလို့ ဆိုပါတယ်။””
““တရားမမျှတမှုတွေ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံရတာတွေ၊ အယူဝါဒအစွဲတွေ၊ ကိုယ့်အယူဝါဒနဲ့မတူရင် နှိပ်ကွပ်တာတွေ ဟာဆိုရင် နေ့စဉ်တွေ့နေရပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို တိုက်စားပစ်တဲ့ အဖျက်အမှောင့် အင်အားတွေ ဆိုတာရှိပါတယ်။””
.““လူသားတွေ ရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးကို မရတာ မျက်ကွယ်ပြုတာဟာ ဆိုရင် ရိုင်းစိုင်းပြီး လူမဆန်တဲ့ အပြုအမူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုယုံကြည်ခွင့်တွေရလာမယ့် အချိန်၊ အကြောက်တရားတွေ ကင်းပြီး လူသားတိုင်း ရသင့်တဲ့အမြင့်ဆုံးအခွင့်အရေးတွေ လိုအပ်ချက်တွေကို ရလာမယ့်အချိန်…””
““ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆို မကောင်းတဲ့အား က ကောင်းတဲ့အားထက်သာနေရင် ကျွန်မတို့အားလုံး ဒုက္ခရောက်နိုင်ခြေရှိတယ်။ မကောင်းတဲ့အားတွေ အကုန်လုံးကိုရော ဖယ်နိုင်ပါ့မလားလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေကတော့ မထုတ်နိုင်ဘူးလို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။””
““အကျယ်ချုပ် နေလိုက်ရတဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်မဘ၀မှာ သိလာ ခံယူလာတဲ့အမြင်တွေ၊ နဲ့စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ကောင်းကောင်းတွေးဆဖို့ အချိန်အလုံ အလောက်ရခဲ့တာပါပဲ။””
ဘာသာပြန်ထားတာ တင်ပေးလိုက်လို့ ငါ့တို့သဂျီးဒီတခါတော့ ကြိုးစားလှချည်းလားလို့ ချီးကျူးမလို့ပဲ ရှိသေးတယ်
ဘာသာပြန်ပေးသူ ဒေါက်တာ ကောင်းမြတ်ကျော်ကို ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ပါတယ်။
တင်ပေးတဲ့ သဂျီး ကိုလည်း ထို့နည်းလည်းကောင်းပါ။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား
အသေအချာ ခံစားပီးဖတ်ဖို့ ကူးသွားပါတယ်။
ဒါမျိုးက ပရင့်ထုတ်ပီး ဖတ်မှ အဆင်ပြေတာမို့
ဘာသာပြန်တဲ့ ဒေါက်တာနဲ့ တင်ပေးတဲ့ ဒို့များသဂျီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျို့…
ဒေါ်စုက မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်ကို reference လုပ်ပြီး ပြောသွားတယ်နော်။
(ကျွန်မ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်နဲ့ နေရတဲ့အချိန်မှာမှာ ဒုက္ခဆင်းရဲခြောက်မျိုး အကြောင်းကို သေချာလေ့လာခွင့်ရခဲ့တာပါ။ ပဋိသန္ဓေနေရခြင်း၊ အိုရခြင်း၊ နာရခြင်း၊ သေရခြင်း၊ ချစ်ခင်သူနှင့်ခွဲခွာရခြင်း၊ မချစ်ခင်သူနဲ့ အတူတကွနေရခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ ဒီခြောက်ချက်ကို နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ဘာသာရေးအမြင်နဲ့မဟုတ်ပဲ လောကီအမြင်နဲ့ လေ့လာပါတယ်။)
ဇာတိပိဒုက္ခာ၊ဇရာပိ ဒုက္ခော၊ဗျာဓိပိ ဒုက္ခံ၊မရဏံပိဒုက္ခော၊
ပိယေဟိဝိပ္ပယောဂေါဒုက္ခော၊အပိယေဟိ သမ္ပယောဂေါဒုက္ခော လို့
ယံပိစ္ဆံ နလဘတိ (လိုတာမရတဲ့ ဆင်းရဲ)ကိုတော့ မဆက်စပ်လို့ ထည့်မပြောဘူးထင်ပါတယ်။
(ဒီဒုက္ခတွေဟာ ကျွန်မတို့ ရဲ့ဘ၀မှာ ရှောင်လို့မရနိုင်ရင်၊ လက်တွေ့ကျကျ လျော့နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်လုပ်ရမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နဲ့ မွေးပြီးချိန်မှာ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက် အစီအစဉ်တွေကိုပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အတွက် လိုအပ်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနိုင်ရမယ်၊ ကျန်းမာရေးအခြေခံစောင့်ရှောက်မှု တွေ၊ မေတ္တာစေတနာနှင့်သုနာပြုစုမှုတွေ၊ နောက်ဆုံးနေ၀င်ချိန်မှာ စောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ကောင်းကောင်း ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်။ နောက်ကကျန်တဲ့ ချစ်သောသူနှင့် ကွေကွင်းရခြင်း မချစ်မနှစ်သက်သူနှင့် အတူနေရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခ နှစ်မျိုးကို ကျွန်မပိုပြီး စိတ်ဝင်စား အလေးပေးမိပါတယ်။)
ဒါကတော့ ဒေါ်စုက တရားတော်ကို (တစ်နည်းပြောရရင် စာကို) apply လက်တွေ့အသုံးချဖို့ နည်းလမ်းရှာထားတာလို့ ပြောရမယ်။
သွေးတတ်တဲ့လူလက်ထဲမှာ စိန်ရဲ့ အရောင်ပိုလက်လာသလိုပါဘဲ။
ပြည့်စုံ ကောင်းမွန် တဲ့ မိန့်ခွန်း ကို ပြောကြား သွား တဲ့ အမေစု နဲ့ အတူ ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ ဒေါက်တာ ကောင်းမြတ်ကျော် နဲ့ တင်ပေးတဲ့ သဂျီး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင် ဗျာ ၊ ကျန်ရှိနေ သော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား များလည်း အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက် ကြပါစေ၊၊၊ လူ အချင်းချင်း နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်း သတ်ဖြတ် နေချင်းမှ လည်း ကင်းဝေးကြပါစေ၊ တကဘာ လုံးမှာ ရှိတဲ့ မိသားစုများ အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာ အတူတကွနေထိုင်လုပ်ကိုင် နိုင်ကြပါစေ၊
မိန့် ခွန်းစကားတွေကိုဘာသာပြန် ဆိုကာ…
ကိုယ်တိုင် ဘိုလိုမွှတ်ထွှတ်နေလို့ ဘယ်တော့မှ ဘာသာပြန်ပေးဖော်မရသော်လည်း
တင်ပေးဖော်လေးတော့ ရသေးသော သဂျီး ကိုလည်း ကျေးကျေး…
တရားသဘောကို လောကီအမြင်နဲ့ အပ္ပလိုင်း လုပ်နိုင်တဲ့ ကြီးမေ ကိုလည်း ကျေးကျေး..
အယ်လ်အေ ရောက်ရင် ၀င်ဖြစ်အောင် ၀င်စမ်းပါ ….ကြီးမေရာ …
ကြီးမေသာ ချွတ်ရင် ဟိုလူဂျီး ကျွတ်ပါတယ်. ..
မနက်ဖြန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၇ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ILO ညီလာခံတွင် ပြောကြားသော ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် မိန့်ခွန်း ဖတ်လိုပါက
ဗျို့ သဂျီး …
ဟိုမင်းသမီး လင် ၇ ခါ ယူတာ ကြ ပြပီး
သည်လောက် ကမ္ဘာတန်း နာမည်ကျော်တဲ့
ဖြစ်စဉ်ကျမှ မျက်စိပိတ်နေတဲ့ မီဒီယာ ဒွေကို
လာပါ … စရအောင် …
ကမ္ဘာတန်း သမိုင်းဝင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်မို့ …
ကမ္ဘာတန်း ချဉ်ဘတ် လေးဒွေ သိပ်ကြရအောင်ပါ….